CNC igwe, Vetikal Maching Center, 3 & 4 axis, China Supplier
Ngwa igwe igwe
CNC Universal igwe Machine
Universal Vetikal igwe igwe
Universal kwụ igwe
Drilling na igwe igwe
Igwe lathe igwe
CNC agbanye Center
CNC lathe igwe
CNC anwụrụ threading lathe
Igwe akpụ akpụ igwe
Igwe Igwe Igwe Hydraulic
Hydraulic mpempe akwụkwọ Metal shiee Machine
Hydraulic mpempe akwụkwọ ekwe igwe
Sadulu N'ịga Mkpụrụ Grinder TSA40100
Sadulu N'ịga Mkpụrụ Grinder TSA2050
Manual Mkpa grinder M618
Radial Drilling igwe
Ị nọ ebe a: Ulo1 / CNC igwe, Vetikal Maching Center, 3 & 4 axis, China S ...
AKW PRKWỌ AKW FORKWỌ Maka Igwe Igwe
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi ụgbọelu (ụgbọelu kwụ ọtọ, ụgbọelu kwụ ọtọ), uzo (ụzọ ụzọ, t-oghere, oghere dovetail, wdg), gbawara agbawa ezé (gia, spline shaft, gburugburu gburugburu), oghere dị n'ime, ụdị curved niile. elu, n'ichepụta siri ike nke mgbanwe na ịcha nhazi, igwe igwe igwe CNC ga-abụ ezigbo nhọrọ gị. Igwe igwe igwe CNC eji arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe na akụrụngwa, akụrụngwa eletriki, ọgba tum tum, ngwaọrụ, ngwaike, moto na mpaghara ndị ọzọ.
Nhọrọ nke igwe igwe CNC na-adabere n'ogologo nke ọrụ ahụ, nha na ọnọdụ nhazi, maka nhazi nkenke, obere obere na ọkara na mgbe ọ na-emeghachi ugboro ugboro, iji CNC igwe egweri ihe kwesịrị ekwesị, ọ bụrụ na akụkụ buru ibu , nnukwu nhazi nkenke nhazi, kwesịrị ịhọrọ gantry nhazi center.The igwe igwe na nnukwu ogo nke akpaaka na-anọchi igwe igwe na-emekarị, belata ọrụ nke ndị ọrụ, ihe na-eme ka nrụpụta na-arụpụta bụ ihe a na-apụghị izere ezere. isi mmalite, zuru ezu na nkọwa, ịnabata ịjụ.
Mme mbụme?Nye anyị oku na + 86-15318444939, ma gwa otu onye ọkachamara ọkachamara anyị okwu.I nwekwara ike dejupụta akwụkwọ ịkpọtụrụ anyị.
CNC igwe maka ire:
nkọwapụta na oyiyi
Oghere caching CNC, 1160
Isiokwu szie: 1200 * 600mm
Njem: 1100 * 600 * 600mm
Main Motor: 11kw
Ebe obibi machị cnc1270
Isiokwu szie: 1360 * 700mm
Njem: 1200 * 700 * 600mm
Main Motor: 15kw
Ebe obibi machị cnc1370
Njem: 1300 * 700 * 600mm
Ebe obibi machị cncOgbe 650
Isiokwu szie: 900 * 400mm
Njem: 600 * 400 * 500mm
Main Motor: 5.5kw
Ebe obibi machị cnc850
Isiokwu szie: 1000 * 500mm
Njem: 800 * 500 * 500mm
Main Motor: 7.5kw
Ebe obibi machị cnc855
Isiokwu szie: 1000 * 550mm
Njem: 800 * 550 * 550mm
Ebe obibi machị cnc640
Isiokwu szie: 1000 * 360mm
Njem: 600 * 360 * 450mm
Main Motor: 3.7kw
Igwe igwe igwe 720
Isiokwu szie: 600 * 200mm
Njem: 300 * 200 * 300mm
Main Motor: 1.1kw
736 igwe nri igwe
Isiokwu szie: 1250 * 360mm
Njem: 900 * 400 * 500mm
Video nke igwe igwe igwe
Nnukwu ikike, nkwụsi ike dị elu, nnukwu ọsọ
RỌ RITE ỌR Q
(Gwa anyị mkpa gị, anyị ga-aguputa gị n’ime awa iri na abụọ)
Biko hapụ ala a tọgbọ chakoo.
Ajuju na A
Gịnị bụ a CNC igwe?
CNC igwe bụ ukwuu akpaka-egwe ọka na ngwa, nwere ike mepụta workpiece unattended nhazi. Ngwaọrụ ahụ nwere ike ịbụ egwe ọka, mkpọpu ala, ihe na-agwụ ike, ịmegharị, ịmegharị na usoro ndị ọzọ mgbe naanị otu jikọtara. Dị ka ọdịdị, nha, nkenke na nkụda ihu nke akụkụ na teknụzụ ndị ọzọ chọrọ iji zụlite usoro nhazi, họrọ nhazi nhazi. Site na mmemme akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ mmemme akpaka site na iji sọftụwia CAM, usoro mmemme mmemme ahaziri ntinye na njikwa. Manual incremental ije na-na-emegharị na-akpali ndị workpiece na mmezi ihe cutter, na-aga n'ihu ije ma ọ bụ ntuziaka wheel ịkwaga igwe ngwá ọrụ. Debe ebe mmalite na mmalite nke usoro ihe omume ahụ ma debe akara ngosi ngwaọrụ. Mgbe onye njikwa na-ahazi usoro ihe omume ahụ, onye nchịkwa ahụ na-enyefe ntụziaka maka ngwaọrụ servo ahụ. Ngwa ọrụ servo na-eziga akara ngosi akara na igwe ọrụ. The spindle moto na-eme ka ngwá ọrụ bugharia, na servo moto na X, Y na Z direction akara ikwu ije nke ngwá ọrụ na workpiece dị ka a ụfọdụ track, ka ị na-aghọta na ọnwụ nke workpiece.
Igwe na-arụ ọtụtụ ihe nwere ike ime ka akụkụ nke anọ dị elu, n'elu ikpo okwu na-agagharị iji gbakwunye ntụgharị ogo 360 nke isi na-ekewa eletriki, ka o wee nwee ike mepee oghere bevel na-akpaghị aka, igwe bevel na oghere ndị ọzọ dị mgbagwoju anya. -enweghị ọnwụ nke nkenke nke abụọ clamping.
CNC igwe igwe nkenke, adaba na oru oma, Ọ bụ ihe dị oké mkpa mpempe akụrụngwa maka ezi metal egwe ọka.
Ofdị CNC igwe
1, Dịka a na-ekewa ụzọ ntụgharị ihu igwe, na igwe igwe CNC, igwe CNC igwe, gantry CNC igwe, igwe kwụ ọtọ na kwụ igwe.
2, Dị ka ọrụ nhazi ahụ si kee nkịtị igwe igwe igwe, CNC gia igwe igwe, CNC iyingomi igwe igwe.
3, Dabere na ọnụọgụ njikwa axis na-ekewa abụọ-axis CNC igwe igwe, atọ-axis CNC igwe igwe, abụọ-axis CNC igwe igwe, multi-axis CNC igwe igwe.
4, Dabere na usoro njikwa usoro usoro ejiri kewaa igwe na-emeghe igwe CNC, igwe eji emechi emechi mechiri emechi, igwe ihe eji emechi mechi emechi igwe.
Ngwa nke igwe igwe igwe
Na ọdabara Ngwuputa igwe, akpakanamde, aerospace, obibi, nkwakọ, agha ụlọ ọrụ, ebu, mbupu, akwa igwe, ugbo ala ígwè, Metallurgical Ngwuputa, igwe ngwá ọrụ n'ichepụta na ndị ọzọ ụlọ ọrụ isi akụrụngwa.
CNC-egwe ọka igwe Ọdịdị, mmiri
A mụrụ ụlọ ọrụ nhazi mbụ na ụwa na United States na 1958. companylọ ọrụ na United States gbakwunyere ngwaọrụ na-agbanwe ngwaọrụ na igwe CNC na-agwụ ike ma na-egwe ọka, nke gosipụtara ọbịbịa nke ụlọ ọrụ ígwè mbụ. N'ime afọ 40 gara aga, enweela ụdị ebe ọrụ igwe dị iche iche. Ọ bụ ezie na ha nwere ọdịdị na ọdịdị dị iche iche, ha n'ozuzu ha nwere akụkụ ndị a.
1. Ihe ndị bụ isi
Ihe mejupụtara ya bụ akwa, kọlụm na okpokoro na-arụ ọrụ, nke bụ akụkụ bụ isi nke akụkụ etiti igwe ahụ. Akụkụ ndị a buru ibu gụnyere ihe nkedo ígwè na akụkụ nhazi nke ígwè. Ha ga-ebu ibu static nke machining center na ọnwụ ibu n'oge machining. Yabụ, ha ga-enwerịrị isi ike dị ukwuu, ha bụkwa akụkụ nwere nnukwu igwe na olu kachasị na etiti igwe.
2. Spindle akụrụngwa
Ọ na-emi esịnede a spindle igbe, spindle moto, spindle na spindle amị. Mbido, nkwụsị, na ntụgharị ọsọ nke spindle na-achịkwa usoro akara ọnụọgụ, na-egbutu ya site na ngwa arụnyere na spindle. Akụkụ nke spindle bụ ike mmepụta akụrụngwa nke igwe yana akụkụ dị mkpa nke etiti igwe. Ọdịdị ya nwere mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ nke etiti igwe.
3. Usoro nchịkwa nọmba
Ihe mejuputara ya bu ihe CNC, ihe nchikota nke ihe omume, ihe nkesa na igwe. Ọ bụ etiti etiti igwe ahụ iji mepụta usoro nchịkwa usoro ma chịkwaa usoro ọrụ ọrụ.
4. Akpaka ngwá ọrụ mgbanwe (ATC)
Ihe kachasị dị iche n'etiti etiti igwe na igwe akụrụngwa bụ na ọ nwere ikike ịhazi akụkụ na ọtụtụ usoro yana nwee setịpụrụ ngwaọrụ na-agbanwe agbanwe akpaka.
5. Usoro nchịkwa nọmba
Nke a bụ isi akụkụ nke igwe igwe igwe CNC, nke nwere usoro njikwa CNC, ogwe ọrụ, igwe na-arụ ọrụ aka, ọkwọ ụgbọ ala, igwe ọrụ na ike USB. Dakọtara na ụbụrụ nke igwe igwe CNC, a na-edezi mmemme niile na Koodu na sistemụ CNC.
6. Nchebe zuru ezu
Akụkụ a dị ka ihe agha nke ngwá ọrụ CNC, nke nwere ike ichedo akụrụngwa igwe site na mmebi mpụga, ma chebe onye ọrụ na gburugburu ebe ọrụ site na mmetụta nke akụrụngwa igwe. E kwesịrị itinye panti sistemụ na akụkụ eletrik na ya.
7 bọl bọl
The adiana nke servo moto enweghị ike ozugbo ụgbọala na worktable na spindle ịkwaga. Ọ bụ site na bọlbụ, ntụgharị nke moto ahụ, gbanwere n'ime usoro nke table. Bọọlụ bọọlụ na moto ahụ jikọtara ya na njikọta. Scghasa na worktable jikọọ mkpụrụ.
8 usoro ndu
Mgbe worktable na-akpali na isi, ọ ga-emepụta esemokwu na igwe ngwaọrụ. Ngwurugwu usoro ndu na-arụ ọrụ nke mmanu na mbenata esemokwu. E nwere bọl ma ọ bụ ihe dị n'ime ya. Ọ nwere ike hụ na izi ezi na ọsọ nke tebụl ije.
9 lubrication usoro
Igwe mmanu eletrọniki na-anapụta mmanụ mmanu na ebe a na-ete mmanụ nke akụrụngwa akụrụngwa iji mee ka ihe eji arụ ọrụ nke igwe rụọ ọrụ, ka ọ wee nwee ike ịkwalite ntụkwasị obi na ndụ ọrụ nke akụrụngwa igwe. Sistemụ mmanu mmanụ bụ sistemụ akpaka jikọtara ya na usoro akara ọnụọgụ ma na-achịkwa usoro akara ọnụọgụ. Enwere ike ịchịkwa oge na oke lubrication.
Olee ụdị workpiece kwesịrị ekwesị maka nhazi na CNC igwe?
CNC machining center nwere uru nke nnukwu akpaaka, ike dị elu, oke nkenke, ọsọ ọsọ ọsọ na ntụkwasị obi dị elu, mana uru ndị a dabere na ọnọdụ ụfọdụ. Machinlọ ọrụ ịkpụzi igwe nwere ike ịrụ ọrụ kacha mma naanị n'okpuru ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ihe ndị a kachasị mma maka ebe a na-arụ ọrụ.
1. Akụkụ etinye n'ime mmepụta oge na ugboro ugboro
Demandfọdụ ndị na-achọ ahịa n'ahịa na-eto eto ma na-emekwa n'oge a kara aka. Ọ bụrụ na ejiri akara mmepụta pụrụ iche, uru ahụ agaghị efu ọnwụ. Nhazi arụmọrụ nke akụrụngwa ndị pere mpe pere mpe, na ogo anaghị edozi. Mgbe ogbe (akụkụ) nke machining center gbusiri nke ọma, mmemme ahụ na ozi dị mkpa nwere ike ịchekwa, mmeputakwa ngwaahịa ọzọ nwere ike bido rụpụta ma ọ bụrụhaala obere oge ịkwadebe.
2. Oke ọnụ oke nkenke akụkụ
Akụkụ ụfọdụ chọrọ obere, mana ha dị oke ọnụ. Anaghị ekwe ka ha kpochapụ ha. Ha chọrọ nkenke dị elu na oge owuwu dị mkpirikpi. Ọ bụrụ na a na-eji ngwa igwe eji arụ ọrụ iji rụọ ọrụ, ọ chọrọ ọtụtụ ngwaọrụ igwe iji hazie ọrụ, ọ dịkwa mfe imetụta ihe ndị mmadụ iji mepụta mkpofu. Ọ bụrụ na a na-eji ebe a na-arụ ọrụ maka nhazi, usoro ihe omume na-achịkwa kpamkpam site na mmemme ahụ, nke na-egbochi ihe nnyonye anya na usoro ahụ, ma nwee arụmọrụ dị elu na ịdị elu Ọnụ ọgụgụ ahụ kwụsiri ike.
3. Otutu iche-iche na obere-ogbe akụkụ
Mgbanwe nke imepụta etiti igwe na-egosighi na nzaghachi ngwa ngwa na ihe ndị a chọrọ maka nhazi akụkụ kamakwa ọ nwere ike mepụta ngwa ngwa ngwa ngwa ma jikwa ahịa ahụ ngwa ngwa.
4. Akụkụ nwere usoro dị mgbagwoju anya na ọtụtụ usoro na nhazi ọtụtụ ọdụ
Akụkụ ụfọdụ nwere usoro dị mgbagwoju anya ma chọọ ngwa ọrụ dị oke ọnụ iji rụọ ọrụ na igwe akụrụngwa nkịtị. Ojiji nke igwe igwe CNC chọkwara iji dochie ngwaọrụ na ihe eji arụ ọrụ ọtụtụ oge. Iji igwe na-arụ ọrụ, ọ ga-ekwe omume ịmecha mkpọpu, egwe ọka, ihe na-agwụ ike, ịme ọpịpị, ntanye na nhazi ọtụtụ usoro ndị ọzọ n'otu oge.
5. Siri ike atule ihe
Machinlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe nwere ọtụtụ uru na ịkpụzi ụdị akụkụ a
Gịnị bụ koodu G na koodu M?
M koodu na-arụ ọrụ inyeaka na ngwaọrụ igwe CNC. Enwere ike ịtọ ọrụ arụmọrụ ụfọdụ site na iji ọrụ inyeaka, dịka M3: ntụgharị ntụgharị ihu, M4: ntụgharị ntụgharị, wdg.
G koodu, kwadebe ọrụ. G koodu bụ ntuziaka na-eme ka igwe ahụ guzobe ọnọdụ nhazi ụfọdụ. Dika ntinye ederede, nkwekorita ndi ozo, ugwo akuku, nhazi usoro nhazi, wdg.
M ntụziaka na koodu G bụ ọrụ bụ isi nke mmemme igwe NC. Site na koodu ndị a, enwere ike ịmegharị usoro
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji mụta koodu G?
G-koodu (nke a makwaara dị ka rs-274) bụ asụsụ a na-ejikarị eme ihe maka njikwa ọnụ ọgụgụ.
Ọ na-ewe oge iji mụta koodu ahụ. Ọ baghị uru ikwugharị koodu niile. Nwere ike ịjụ ajụjụ akwụkwọ nrụrụ aka mgbe ịchefuru ya. Mana igodo bụ ijikwa koodu ngwa ọ bụla. Enwere ọtụtụ ndetu na ndụmọdụ, mgbe ị na-eji aghọta koodu, ị ga-ejidesi ike ma cheta. Cheta, ebula koodu ahụ n’isi, ọ kachasị gbasara etu esi arụ ọrụ ahụ. Imirikiti Koodu ndị ahụ na-adịkarị.
Dabere na ntọala dị iche iche nke ndị na-amụ ihe, oge mmụta nke mmemme CNC dịkwa iche, nke na-ewe ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọbụlagodi ọtụtụ afọ.
CNC-egwe ọka igwe mmezi na idozi ntuziaka
Nnyocha kwa ụbọchị
Nnyocha kwa ụbọchị: mgbe ị na-arụ ọrụ igwe, lelee ihe ndị na-esonụ otu otu. Ọ bụrụ na achọtara ihe na-adịghị mma, chọpụta ihe kpatara ya ozugbo wee kpochapụ ya. N'ihe banyere nsogbu ndị a na-enweghị ike idozi, biko gwa ụlọ ọrụ anyị ozugbo enwere ike iji kpochapụ adịghị mma ozugbo enwere ike.
1.1 tupu mbido
1) Lelee ma akara ike, akara niile, na ọkpọkọ ọkpọkọ na-emebi ma ọ bụ na kọntaktị na-adịghị mma.
2) Lelee ma a ga-agbakwunye mmanụ mmanu na mgbapụta mmanụ nke mgbapụta mmanu mmanu yana ma ọkwa mmanụ ọkọlọtọ nke igbe ikpuru bụ ihe kwesịrị ekwesị maka akwụkwọ akụkọ ngwaọrụ kwụ ọtọ.
3) Lelee ma nchikota ato ato bu ihe kwesiri.
4) Lelee ọkpọkọ mmanụ na nkwonkwo maka ụcha mmanụ.
5) Lelee ma ikuku ikuku nke nchikota ato ato bu ihe kwesiri ma ma a na-agbanwe mgbanwe ngbanye dika achọrọ.
6) Lelee ma mmiri mmiri mmiri nke mmiri mmiri chọrọ ịgbakwunye mmiri mmiri.
7) Lelee ma ngwaọrụ nchedo dị mma ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, na enweghị ndị ọrụ na mpaghara dị egwu.
2.1 mgbe mmalite
1) Lelee ma ọnọdụ okpomọkụ nke spindle bụ ihe nkịtị ma enwere ụda na-adịghị mma.
2) Lelee ma ihe ndị na-esonụ nke mmanu mmanu mmanu bụ ihe nkịtị.
a. Mmanu na-enye mmanụ dị n’etiti 3kfg / cm2-4kfg / cm2
b. Ma oriri nke mmanụ mmanu bụ ihe nkịtị (ọ bụrụ na oriri ahụ dị oke ngwa ngwa, a ga-enyocha sekit mmanụ maka ụcha mmanụ).
c. ihe Ma oge ọrụ mmanụ mgbapụta dị nkịtị (3-6cc / oge / nkeji 5 ka akwadoro).
3) Lelee ma usoro nhazi ahụ zuru ezu.
4) Lelee ma machining ngwá ọrụ zuru ezu.
5) Lelee ma ihe ndozi ahụ agbanweela na ma datum ya agbanweela.
6) Lezienụ anya na onye na-agbanwe ọkụ na-arụpụta nnukwu okpomọkụ n'oge ọ bụla.
7) Na-etinye mmiri ahụ mgbe niile na nzacha na nchịkọta isi atọ iji jide n'aka na gas na-adịghị.
8) Ma na spindle ịfụ bụ nkịtị.
1.3 mgbe arụ ọrụ
1) Wepu ibe niile dị na tebụl, ọta atọ, ogwe mmiri, nza ihuenyo na nnukwu ọta.
2) A ga-ehichapụ oghere dị n'ime ya nke spindle dị ọcha.
3) A ga-ewepu chippings na aka n'oge ọ bụla na 8 ọ bụla.
4) Mee ka axis atọ ahụ gaa n'etiti etiti strok iji mee ka nguzozi.
5) Mgbe itinye nchara na-egosi mmanụ na worktable, wepụ ibe.
6) Mgbe njedebe nke mgbanwe ahụ, ọdịdị nke igwe ahụ dum kwesịrị ikpochara otu ugboro.
7) Lelee ma ụzọ nchekwa ahụ mechiri emechi.
8) Lelee ma ike mgba ọkụ dị anya.
9) Lelee ma ike isi iyi gbanwere.
2 ndozi oge niile
Ntuziaka ndozi 2.1
1) Iji hụ na nchekwa nke ọrụ mmezi, ụzọ na ọta eletrik niile kwesịrị imechi, ọkachasị igbe njikwa na igbe ọrụ.
2) Amachibidoro iji egbe ikuku ma ọ bụ ikuku jikọtara iji kpochaa akụrụngwa igwe (iji gbochie irighiri ihe na uzuzu na-agba n'ime agba ma ọ bụ slideway).
3) Tupu ịmalite ịrụzi ọrụ na ịrụzi ọrụ dị n'elu na n'azụ igwe akụrụngwa na mkpuchi nchedo, jide n'aka na ịgbanyụ ọkụ ọkụ na ngalaba ọrụ, wee gbanyụọ ike. N'otu oge ahụ, kwụgidere ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị iji gbochie ndị ọzọ ịgbanye igwe.
2.2 mmezi kwa ụbọchị
1) Wepụ ibe, ájá na sundries na akụkụ niile ekpughere nke akụrụngwa akụrụngwa na ihe ndozi, ma wepu ibe, ájá na sundries na ngwe ngwaọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ inyeaka ndị ọzọ.
2) Hichaa ihe spind spiel.
3) Lelee ma ọkwa mmanụ nke mgbapụta mmanụ na-achọ ịgbakwunye mmanụ ọhụrụ yana ma nrụgide mmanụ dị n'ime oke akọwapụtara (3-5kgf / cm2).
4) Lelee ogo mmanụ dị elu nke tankị ngwakọta atọ iji hụ ma ọ dị mkpa ịgbakwunye mmanụ ọhụrụ.
5) Lelee ma mmiri nke nyo ke atọ-ነጥብ Nchikota na-atara kpamkpam.
6) Lelee ma nrụgide ikuku nke ikuku ikuku dị nkịtị (uru ≥ 6 kgf / cm2).
7) Lelee ma mmanu mmanụ dị na sekit mmanụ yana nkwonkwo, ma were ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
8) Hichaa clamping akụkụ nke ọ bụla ahụ na magazin.
9) Lelee ma ọ dị mkpa ịgbakwunye mmiri ọkụ ahụ ma bido igwe iji chọpụta ma usoro jụrụ ahụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
10) Hichaa gụrụ akụkụ eletriki na ịgba switches.
11) Lelee ma ọkụ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ọkụ ịdọ aka na ntị dị mma.
12) Debe gburugburu igwe dị ọcha ma dozie ya.
13) Lelee ihe mmebi ahụ maka itinye carbon n’ọbara.
Ma gụọ 2.3 kwa izu
1) Na-eme nlekọta kwa ụbọchị
2) Lelee elu nke spindle na akụkụ ndị ọzọ na-agba ọsọ maka ụda na-adịghị mma na mmebi, ma dị ọcha gburugburu spindle.
3) Lelee ma mmalite nke ọ bụla axis drifts.
4) Hichaa nyo nyo nke mmiri tank, ma tinye coolant mgbe ọ bụ ezughi oke.
5) Hichaa atọ ebe jikọtara nyo ihuenyo.
6) Gbaa mbọ hụ ma ọ bụrụ na spindle grabbing na loosening edinam dị mma.
7) Kwenye ma ngbanwe ngwungwu a di ire.
8) Lelee ma mmanu mmanu na-arụ ọrụ (3-6cc / oge / 5 nkeji, mgbali mmanụ 3-5kfg / cm2).
Ndozi 2.4 kwa ọnwa
1) Mee mmezi kwa izu.
2) Hichaa n'ime nke akara igbe, ọrụ panel na nyo ihuenyo nke okpomọkụ Exchanger.
3) Lelee ọkwa nke worktable ma hụ na arịlịka bolts na-ekpochi.
4) Lelee ma ọ bụrụ na achọrọ ịhazigharị eriri eriri axis atọ.
5) Lelee ọrụ nke solenoid valve na njedebe ịgba.
6) Hichaa ahịhịa nke ụzọ nduzi axis atọ ma melite ya ma ọ dị mkpa.
7) Lelee maka adịghị mma kọntaktị mgbe waya njikọ bụ rụrụ.
8) Lelee ma mmanụ mmanụ adịghị egbochi, ma hichaa ihuenyo nza na nkwonkwo ebe a na-egbochi ya.
9) Lelee ma ngwaọrụ mkpuchi na oge dị mma, chọpụta ma onye na-emebi ihe nwere nrụgide kwesịrị ekwesị ma hichaa ya.
10) Igbapu mmiri mmiri mmiri, kpochaa mmiri mmiri na ọkpọkọ mmiri, wee wụnye mmiri mmiri.
11) Kwenye na onye nchịkwa NC na-arụ ọrụ nke ọma.
12) Griiz ihe nkedo nke uzo di otu ugboro n'ọnwa.
2.5 ọkara afọ mmezi
1) Mee mmezi kwa ọnwa
2) NClọ NC dị ọcha, njikwa njikwa, na akụrụngwa igwe.
3) Dochie mmanu mmanu mmanu nke mmanu mmanu mmanu, tinye mmanu gearbox nke akwukwo akuko uzo ma hichaa oghere di n'ime.
4) Lelee nkwụsị azụ nke oghere atọ ma gbanwee ya.
5) Lelee ọnụọgụ grid atọ-axis ma gbanwee ya.
Ndozi 2.6 kwa afọ
1) Hichaa moto niile.
2) Lelee ma njikwa switches na ime panel ndị chọrọ nlezianya na nkịtị.
3) Lelee na mmemme ule na-aga nke ọma.
4) Chọpụta ma counterweight yinye na-na nkịtị ojiji.
5) Wepu nkwụnye ego carbon na kọntaktị nke ndị disconnector niile na igbe eletriki ma hichaa ya.
3 akụkụ dochie na mmezi
3.1 rụọ ọrụ ndị a ga-arụ tupu dochie akụkụ.
1) Dee akara igwe.
2) Detuo nkọwapụta na akara nke akụkụ ndị edochi edochi.
3) Detuo mmekọrịta ọnọdụ dị n'etiti akụkụ ahụ na akụkụ ndị ọzọ metụtara ya, ka ị wee gbakọta nke ọma.
3.2 nlekọta anya
1) Ndị na-arụ ọrụ mmezi ga-aghọta usoro mmechi ahụ ma rụọ ọrụ nrụzi mgbe emechara ahụ.
2) Mgbe ị na-arụzi ime:
a. Wepụ ike mbụ;
b. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịkwado maka mmezi, kpochie igwe na mbụ wee banye n'ime ime;
c. ihe Wepu ibe nwere ike ịkụda ma ọ bụ metụ mpaghara ahụ aka ka ọ ghara ịkụcha ibe ya;
d. Hichapụ mmanụ na mmanu mgbawa na ebe ị nwere ike ịzọ ụkwụ ka ị ghara ịmịlata.
3) Mgbe edochiri ihe ohuru, anaghi ekwe ka tufuo ihe ochie tupu ikwenye oru ya.
3.3 ikike mmezi na oru
1) Ndị ọrụ kwere ka ihe ejiri rụọ ọrụ ahụ:
a. Ihe nkedo na mpempe mpempe akwụkwọ nke na-emetụta izi ezi nke ngwaọrụ igwe.
b. Mfe zụrụ akụkụ, dị ka fuuz, mgba ọkụ, mmanụ circuit, anwụrụ nkwonkwo, wdg
2) Achọrọ ndị ọrụ nwere iru eru ọkachamara maka ọrụ ndozi ndị a:
a. Oké spindle runout;
b. The spindle nwere ndiiche ụda;
c. ihe Na-eduzi ndozi ndozi;
d. Mmezi nke nnyefe ntinye atọ (axis oche, oche oche, ịkwado nkwado na ịmị, wdg).
e. Mmezi magazine tool.
f. Ijikwa mma ịhapụ na nkwekọrịta
Metal Lathe igwe
CNC Pipe Eriri Lathe
Kwụ Metal tingcha Band Hụrụ
Elu egweri igwe
NTAK emi TSINFA
100+ Ndị ọkachamara nwere nkà.
Afọ 15 + nke ahụmahụ
Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere CNC machining
Kedu ihe eji eme nche ụzọ?
Etu esi eji igwe eji eme ihe: Njipu Igwe lathe igwe
Gịnị bụ Metal lathe Machine? Jiri, Nkọwa, Ọrụ, Akụkụ, Eserese
Ntinye Ngwa Lathe: 16dị 16 nke Igwe Lathe
Ngwaọrụ igwe China Supplier
Ekwentị: + 86-15318444939
Ekwentị: + 86-632-5656658
7 * 24 Awa
Mba 6 Industrial Area Park, Dadi Road, Tengzhou, Shandong, China
Pịgharịa gaa na n'elu